1.3 Music Ọhazi
2 Dezie ID3 Tag
2.1 Gbanwé aha
Ma gụọ 2.3 Hichaa
2.5 Idozi ID3 Tags Ọma
2.6 Dezie ID3 akpaghị aka
3 Dezie ID3 Tag na iTunes Library
3.1 iTunes Ọhazi
3.2 Get Album on iTunes
3.3 Tinye sere iTunes
3.4 Chọta na Wepụ oyiri
3.5 Hichaa iTunes Automatical
3.6 wughachi iTunes n'ọbá akwụkwọ
3.7 Idozi iTunes Library
3.8 Wepụ Duplicates Music
Ndị na-eji iOS ngwaọrụ na nwere iTunes arụnyere na ha na-emekarị mkpesa banyere hassle kere site na oke ọnụ ọgụgụ nke unorganized faịlụ echekwara na iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ọtụtụ ugboro ọdịyo egwu nwere misspelled ọgụ egwu ma ọ soro aha, na-efu cover oyiyi, oyiri faịlụ, wdg Ịhazi dị otú ahụ a buru ibu ọnụ ọgụgụ nke faịlụ aka bụ na-ewe oge ma na-agwụ. Iji merie nke a, ị nwere ike ibudata ọ bụla atọ ọzọ iTunes ahazi software nke nwere ike ịzọpụta gị site hefty ọrụ nke ijikwa iOS ngwaọrụ.
A tụnyere table n'etiti 5 kasị mma iTunes otu.
Itucha My Music
http: //www.wondershare website / tunesgo / https: //www.tuneupmedia website / download / windows http: //www.mediamonkey website / download / http: // musicorganizer code.com/rinsemusic http: //download.cnet. com / CopyTrans-Manager / 3000 -18546_4-10842241.html
5 kpakpando 5 kpakpando 4 kpakpando 4 kpakpando 4 kpakpando
Free version maka Windows n'elu ikpo okwu. iOS ụgwọ mbipute: $39.95 Free ikpe mbipute maka Windows. Ugwo version: Kwa Afọ ndenye aha: $ 31 One-oge zuo: $ 40 Free ikpe mbipute dị. Ugwo 'Gold' version: $24.95 Free ikpe mbipute dị. Ụgwọ mbipute maka otu oge zuo: $39.99 Freeware
Windows na iOS Windows, Macintosh, Mac OS X Windows na iOS Windows na iOS Windows n'elu ikpo okwu naanị
• na-abịa na a dị ọcha ma hazie interface.
• eme oru oma management nke otutu iOS ngwaọrụ.
• Streamlines data transfer usoro si iOS ngwaọrụ na kọmputa na azụ. • Oru oma faịlụ ihicha.
• Okwu Mmalite nke a smart mma 'Tuniverse.'
• DeDuper atụmatụ na-enye wepụ duplicates na ala. • Automatic njirimara nke na-efu mkpado mgbasa ozi faịlụ.
• Na akpaghị aka na-azọpụta ndị dezie mkpado n'ime media faịlụ na-esonụ a ezi uche hierarchy.
• 'Hazie' mma na-eme na software ọzọ kenkwukorita na onye ọrụ-enyi na enyi. • Dị Ọcha na-ahazi iTunes n'ọbá akwụkwọ na-akpaghị aka.
• Anọchie Anya ekpuchi oyiyi site n'inyocha ha online.
• Na akpaghị aka na-ahazi ọdịyo egwu dabere na genre. • 'Dọrọ na dobe' atụmatụ-enyere gị aka ngwa ngwa ịkọrọ faịlụ na ala.
• Wuru na-music ọkpụkpọ-enye gị ohere na-egwu media faịlụ site na ngwa.
• Ọ bụ a freeware.
• chọrọ oge iji na-egosipụta data site na iOS ngwaọrụ na kọmputa na ihuenyo. • Multiple atụmatụ mgbe ụfọdụ na-eme ka na iji ngwa mgbagwoju anya.
• Mgbe nhicha ahụ n'ọbá akwụkwọ otu ugboro, ọ bụ ike ziri ezi ya kwa ụbọchị ojiji. • Ịhazi album cover nkà bụ a aka usoro.
• mkpọka mgbe mgbe, mgbe ụfọdụ dị na-emeghe ngwa. • High price maka mmachi atụmatụ. • Ọ dịghị nchekwa ikike.
•-arụ ọrụ nanị na iOS ngwaọrụ.
Wondershare TunesGo-enyere gị aka jikwaa media echekwara na gị iOS ngwaọrụ rụọ ọrụ nke ọma. The software-enye gị ohere ịkọrọ ndị faịlụ n'etiti gị Apple ngwaọrụ-enweghị na-eji iTunes. The kwukwara uru nke-eji nke a software bụ na ọ na-ahapụ gị ịrụ ihe aga-eme na-adịghị ma ọ bụghị na o kwere omume mgbe eji iTunes.
Wondershare TunesGo Akụkụ: •-enyere gị iji hazie iTunes rụọ ọrụ nke ọma.
•-enye gị ohere ịkọrọ videos, music, listi ọkpụkpọ, foto, na kọntaktị site na gị iOS ngwaọrụ iTunes na azụ gị na kọmputa.
• ejisie niile media faịlụ echekwara na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ .
• Enye gị tọghata music na video faịlụ n'ime Apple akwado formats.
• enyere ị mekọrịta ọ bụla Apple ngwaọrụ gị na kọmputa, na-enye gị ohere Jikwaa faịlụ echekwara na ngwaọrụ.
•-enyere gị ka ihichapụ oyiri faịlụ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ma si otú onwe elu na-achọghị ohere nwere site ha.
• Ọ otu oru oma music Ọhazi na-enyere gị ike ahaziri listi ọkpụkpọ.
2. TuneUp Media
TuneUp Media bụ ihe dị mfe nkwụnye na-enyere gị aka hazie gị iTunes n'ọbá akwụkwọ rụọ ọrụ nke ọma na na ala site achọta efu album mkpuchite, wepụ oyiri faịlụ, na gwara ọdịyo tracks.
Atụmatụ: • The 'dị ọcha' atụmatụ nke software na-agụ gị niile media faịlụ na fixes efu utu aha, artists 'aha na ozi ndị ọzọ.
• TuneUp Media si' DeDuper 'atụmatụ eji elu now mkpisiaka technology ịchọta ọtụtụ narị ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ puku nke oyiri audio faịlụ echekwara na gị n'ọbá akwụkwọ.
• 'Tuniverse' bụ ihe ọzọ mma na bụ ọgụgụ isi iji na-enye ngwa elu Fim dị ka ọ na-eme gị mgbe ọkacha mmasị gị artists na-arụ ndụ gị obodo. The atụmatụ na-ahapụ gị achọpụta ọhụrụ music dabeere na mmasị gị genre.
• TuneUp Media Nkwado na-enye onye na-akwado Forum site mmepe. The Forum bụ maka ọrụ ndị nwere ike na-eche nsogbu na-eji ngwa.
MediaMonkey bụ otu oru oma multi-apụta na ngwa na-nwere ọdịyo faịlụ ọkpụkpọ, music Ọhazi, na CD / DVD burner ike na otu usoro ihe omume. The software nwere ike ahaziri dị ka kwa gị chọọ - a mma-adịghị nyere site ndị ọzọ yiri ngwa.
Atụmatụ: • MediaMonkey nwere ike ijikwa ọtụtụ puku ọdịyo na vidiyo faịlụ echekwara na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ rụọ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa.
• The software enye gị ohere download music, fim, na pọdkastị.
• Ozugbo arụnyere, ngwa na-akpaghị aka okụt efu album cover oyiyi na ndị ọzọ na metadata .
• Iji software, ị nwere ike igwu MP3 na ndị ọzọ na audios dị iche iche faịlụ formats.
4. itucha My Music
Itucha My Music bụ a standalone software na tightly integrates na iTunes na-enyere gị aka hazie gị iTunes n'ọbá akwụkwọ n'usoro na coherently.
Atụmatụ: • itucha My Music na-akpaghị aka na-anọchi nke na-efu album cover oyiyi site n'inyocha ha online.
• The ngwa jupụtara n'ime na efu mkpado ọmụma nke ọdịyo egwu na-akpaghị aka na otu click.
• The software-enyere gị iji wepu oyiri faịlụ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ .
• The software-ahazi ihe ọdịyo egwu dị ka ha genre, n'ihi ya kwe gị ike ahaziri listi ọkpụkpọ mfe.
Na CopyTrans Manager i nwere ike ịkọrọ faịlụ n'etiti gị iOS ngwaọrụ na PC enweghị na-eji iTunes. The software na-enyere gị dezie, tinye, play, na hazie gị mgbasa ozi faịlụ methodically.
Atụmatụ: • Mfe ma hazie interface awade atụmatụ na a dị mfe ma doo anya. Nke a na-enyere gị ele ma jikwaa niile media faịlụ ngwa ngwa na na ala.
• The wuru na-mgbasa ozi ọkpụkpọ-enye gị ohere na-egwu songs na vidiyo na otu click.
• The 'Dọrọ na dobe' atụmatụ nke software na-ahapụ gị ịkọrọ faịlụ n'etiti gị iOS ngwaọrụ na gị PC buturu ngwa ngwa.
• Ihe omume enye gị ohere ike na imewe gị onwe gị ahaziri listi ọkpụkpọ.
Olee otú idozi ya mgbe iTunes Library n'efu efu
Olee otú Download Free Music ka iTunes
Ihe kacha ụzọ Hichaa iTunes
A Full Nduzi na Olee otú Jiri iTunes Home Ịkekọrịta
Nzọụkwụ na-agbake Lost iTunes Music
Otú nyefee listi ọkpụkpọ site na iTunes ka iPod
> Resource> iTunes> Best iTunes Ọhazi